Happy Elephant House e Sorochany - 5 iibhedi
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguOksi
Indlu yendlovu eyonwabileyo ikude kufuphi nendawo yezemidlalo yaseSorochany, ijikelezwe lihlathi elidala elinomtsalane, lizimele kubuphithiphithi besixeko. Imithambeka ye-Snowy, umoya omtsha kunye namanzi entwasahlobo afanelekile kwiholide yentsapho okanye inkampani enobungane. Indlu entsha ethandekayo enesitayile se-eco-style, igqityezelwe ngamaplanga aseFinnish kwiploti yeehektare ezi-6 kunye nemithi yama-apile) iveranda evulelekileyo entle, ifenitshala yamaplanga, ibarbecue. Phumla ngokupheleleyo)! Isiqubulo sethu sithi: Eyona nto ingcono okanye AKUKHO nto. Khetha okona kulungileyo, okunye kukuyekelela)
I-cottage ekhaphukhaphu kunye nesitayela esinemigangatho enye enefestile ye-panoramic kunye neveranda yasehlotyeni ebanzi. Brazier nazo zonke izixhobo eziyimfuneko. Izinto zangaphakathi eziyingqayizivele zenziwe ngesandla. Kufuphi neSorochany ski resort, indawo yokugcina amanzi yaseYakhromskoye, iklabhu yegalufa, indawo yokudubula yaseLisya nora. Imizuzu ye-30 ukusuka kwi-MKAD kwaye uyonwabile!). Indlu inamagumbi okulala ama-2: ibhedi e-1 ephindwe kabini kunye nomandlalo wamathambo, ibhedi eyi-2 ye-bunk (kukho icala elisuswayo kwiindwendwe zethu ezincinci) kunye nebhedi encinci ye-sofa. Ekhitshini-igumbi lokuhlala kukho isofa esongwayo. Indawo yokuhlala ekhululekile - abantu aba-5 Isongezelelo sondwendwe ngalunye olulandelayo.
Indawo ekuyo le ndlu ineenduli. Ebusika, isithuthi esinamavili amane siyafuneka ukuze sifike esangweni. Ngokuqinisekileyo ayibalulekanga, kodwa kuyimfuneko ukulumkisa) Ukupaka kunokwenzeka endleleni imizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka endlwini.
Isikhululo saseYakhroma sikwakuhambo lwemizuzu eli-10.
Umbuki zindwendwe ngu- Oksi
NgeSMS, ngefowuni, ngeposi